pps12345 November 13, 2012 - 6:02 pm ကိုးစိုးသူရထွန်းရှင်းပြသွားသည်မှာ အင်မတန်ကောင်းပါသည်။ ဧရာဝတီကို လည်း ယခုကဲ့သို့ အင်တာဗျူးများ ထည့်ပေးသည့် အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင် induction furnace များဖြင့်ကျိုချက်ထားသော သံများကို ကြိတ်ထားသည့် မြောင်းတကာ သံချောင်းများ ပြည်တွင်းဈေးကွက် တွင် ရောင်းချနေသည်မှာ နှစ်တော်တော်ကြာပြီဖြစ်သည်။ ၎င်းသံချောင်းများသည် strain and stress များ မည်သို့မှ တိုင်းတာနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ထိုသံချောင်းများကို ဈေးကွက် အတွင်းမှ ထွက်သွားအောင် အစိုးရပိုင်းမှ ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါသည်။ ရန်ကုန် ကျောက်မြောင်း၊ စမ်းချောင်းနှင့် မြို့ထဲဒေသများတွင် ကန်ထရိုက်တိုက်များကို တစ်တိုက်နှင့် တစ်တိုက် ပူးကပ်ဆောက်လုပ်ထားပါသည်။ ငလျင်လှုပ်ပါက seismic pounding ကြောင့် တစ်တိုက်နှင့် တစ်တိုက် ထိခိုက်ပြီး အဆောက်အအုံများ ပျက်ဆီးမှု ကို မိုမိုအားဖြည့် စေနိုင်ပါသည်။ ရန်ကုန် ကန်ထရိုက်များသည် အဆောက်အဦ ကြမ်းခင်းနှင့် တိုင်အဆက်နေရာတွင် စတားကွင်း ကိုလျှော့ထည့်နေကြသည်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာနေပြီဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ရကိုင်ရသည်ကို ပိုမိုလွယ်ကူစေရန် အတွက်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော် ငလျင်လှုပ်ပါက ၎င်း နေရာတွင် bird case များဖြစ်တတ်ပြီး သံချောင်းလုံလောက်စွာ မထည့်ထားပါက ၎င်း နေရာမှ ပြိုကျလေ့ရှိကြောင်း ကမ္ဘာ့ငလျင်များက သက်သေပြနေပါသည်။ တချို့ကန် ထရိုက်တိုက်များ နှင့် ကွန်ဒိုများတွင် လှေကားများ နှင့် ဓာတ်လှေကားများကို နေရာ အလေအလွင့် မဖြစ်စေရန် ထောင့်များတွင် ထားပြီးတည်ဆောက်ထားပါသည်။ ငလျင်လှုပ်ပါက အဆောက်အဦးကို twist ဖြစ်စေမှု ကို ပိုမို အားဖြည့်စေပြီး အဆောက်အဦး တစ်ခုလုံး ဆိုးဝါးစွာ ပျက်စီး စေနိုင်ပါသည်။ အစိုးရ အနေဖြင့် အဆောက်အဦ စီစစ်ရေး အဖွဲ့များ ဖွဲ့ရာတွင်လည်း ပြောင်းလဲနေသော နည်းပညာ အသစ်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် ယခင်ကဲိ့သို့ အသက်ကြီးသော ပညာရှင်များ နှင့် မဖွဲ့စည်းပဲ ခေတ်ပညာတတ် လူငယ် များနှင့် ဖွဲ့စသည်းတာဝန်ပေးသင့်ပါသည်
Reply Saw November 14, 2012 - 12:45 am To Irrawaddy,
Reply George Than Setkyar Heine November 14, 2012 - 8:43 am And Myitsone Dam is only 100 kms. from the Sagaing Fault Line.
Reply min min November 14, 2012 - 12:23 pm ရန်ကုန်တိုက်ခန်းတွေငလျင်ပြင်းပြင်းလူပ်လို့ကတော့ဗျာမတွေးဝံ့စရာပဲ၂၀၀၅ ငလျင်တုန်းကနှဲ့ချိုးခံ
Reply ထင်လင်း (ြ မင်သာ) December 1, 2012 - 8:05 am ဆည်ကြီးများတည်ဆောက်ထားခြင်းကြောင့် ဆည်ရေ၏ဖိအားသည် ဆည်အောက်ကြမ်းခင်းကို လေးလံစွာဖိထားရင်း မြေအောက်ကျောက်လွှာများကို ဖိ ၊ ဖဲ့၊ ရွေ့လျားစေသောကြောင့် ငလျင်လှုပ်စေနိုင်ပါသည်။ မြန်မာပြည်တွင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီး တည်ဆောက်ထားသောဆည်များ အများအပြားရှိနေလေရာ၊ စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့တလျှောက်ရှိ ဆည်များကြောင့် အနီးအနားက မြို့ရွာများသည် စိုးရိမ်ရပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့ စိုးရိမ်ရသလို ပျဉ်းမနားနေပြည်တော်လည်း အထူးစိုးရိမ်ရပါသည်။
Reply nyein nyein san , shwetaung oo pagoda,monywa December 21, 2012 - 12:45 pm very good article !